Google Pixel iyo Pixel XL waxay joojinayaan helitaanka wararka amniga | Androidsis
Google Pixel iyo Pixel XL waxay joojinayaan helitaanka cusboonaysiinta amniga
Bartamihii bishii hore, Google ayaa soo bandhigtay jiilka afraad ee Pixel range, kala duwan oo ugu dambeyntii waxay qaadatay laba kamaradood gadaashiisa, ka dib isbeddelka laba sano ka hor suuqa (hadda soo saarayaasha badankood waxay aadaan saddex). Horraantii Sebtembar, waxay sii deysay Android 10 dhammaan moodooyinka Pixel, oo ay ku jiraan jiilkii ugu horreeyay.
Jiilkii ugu horreeyay ee qiyaasta Pixel, aragti ahaan kuma jirin liistada aaladaha la doonayo in lagu helo nooca cusub ee Android, laakiin ka soo horjeed kasta oo qallafsan ayay sameysay (wax aan ku mahdiyo helitaanka tusaalahan). Si kastaba ha noqotee, maahan dhammaan war wanaagsan, maadaama aan illaa hadda nimid. Ma jiraan wax cusbooneysiin dheeraad ah.
Laga soo bilaabo Google waxay ku dhejiyeen cusbooneysiin cusub oo amniga ah server-kooda, cusbooneysiin u dhiganta bisha Nofeembar. Cusboonaysiintaan cusub lama heli karo jiilka ugu horreeya ee qiyaasta Pixel. Haddii aan tixgelinno in Google uu ballanqaaday laba sano oo taageero ah oo uu na siiyay sanad kale, kama caban karno, annaga oo aragnay sida soo-saareyaasha kale ay ula macaamilaan macaamiishooda.
Jiilkii ugu horreeyay Pixel wuxuu ahaa taleefankii ugu horreeyay ee ay sameyso Google in shirkaddu soo bandhigtay, iyada oo dhinac iska dhigaysa isbahaysigii ay la lahayd LG iyo HTC ee sannado ka hor la socday Nexus. Xitaa sidaas oo ay tahay, qaabkan ugu horreeya inta badan habka wax soo saarka (iyo naqshadeynta) waxaa fuliyay shirkadda HTC.
Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay waxay ahayd sanadka dheeriga ah ee Google uu siiyay qaybta Pixel, bishaan ayaa ahMarkii ugu dambeysay ee uu helo warbxinta amniga. Waxay u badan tahay, waxaan rabaa inaan sugo, waa in Google uusan gabi ahaanba ka tagin isticmaaleyaasha xadka Pixel, iyo in seddexdii biloodba mar, ay sii deyso cusbooneysiin amniga ah oo lagu xalliyo dhibaatooyinka lagu ogaadey barxadda, iyadoo la raacayo qaabka cusbooneysiinta Samsung.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Google Pixel iyo Pixel XL waxay joojinayaan helitaanka cusboonaysiinta amniga